Akụkọ - Ụkpụrụ nhọrọ maka ihe nkedo akwa ihe nchedo akwa akwa
Ụkpụrụ nhọpụta maka bracket cast brail brail bracket
A na-akpọkwa bracket cast bracket bracket, okporo ụzọ nchekwa, nkedo nchara na-agbado ihe nkwado, ihe mkpuchi nchekwa, ihe nkedo ígwè, mgbochi mgbochi ihe mgbochi, ihe mgbochi okporo ụzọ nkedo akwa ọkpọ ọkpọ, nkwado okporo ụzọ okporo ígwè.
Iji hụ na ịdị mma nke nkwado àkwà mmiri, na ịdị mma nke nrụnye, ndozi, nleba anya na nnọchi nke nkwado àkwà mmiri ahụ, ma ọ bụ site na usoro ihe nkedo a na-etinye n'ime ya ma ọ bụ usoro ụzọ ebuputara ya. kedu ụdị nkwado akwa akwa arụnyere, a na -etinye nkwado akwa n'ọdọ mmiri. Ọ dị mkpa ịtọ kwushin nkwado n'elu. A na-akpọkwa bracket brail bracket bracket steel bracket, brace cast bracket bracket, highway guardrail, cast steel guardrail bracket bracket bracket bracket, guardrail bracket, brara bracket bracket, anti-collision guardrail bracket, highway guardrail cast iron pipe frame, Bridge rail pipe nkwado. Usoro nkwado nkedo nkedo: ịkpụzi ájá, ngwaahịa a rụchara nke ọma, nchacha ájá, na ịchacha agba
N'oge a na -ewu nsu ngere, ndị ọrụ nka ga -enyocha ma mezie ọrụ iwu na -akwadoghị na saịtị ihe owuwu n'oge. Tinye iwu ndozi dị mma yana usoro mgbanwe nsogbu dị mma iji hụ na ịdị mma nke ọrụ ahụ na -emezu ihe achọrọ na nkọwapụta nnabata.
Nchekwa iche iche ụgbọ ala:
A na -ekewapụta ihe ndị dịpụrụ adịpụ n'akụkụ abụọ nke bọs ahụ na ụzọ ndị ọzọ. Ngere mwepụ mkpanaka: ebe dịpụrụ adịpụ ịkwaga na-enweghị akụrụngwa agbakwunyere na ala. Ogige mwepu edoziri: ụlọ dịpụrụ adịpụ nke a na -eli ma ọ bụ na -emezigharị n'ime ala wee dokọta ọnụ.
A ga -enwerịrị ahịrị abụọ yiri ibe ya maka elu na nke ala, nke mere na nsọtụ elu na nke ala nke ụzọ nche na -adị ogologo mgbe etinyere ya. Mgbe anyị na -emepụta ebe nchekwa ahịhịa, ọ dị anyị mkpa ịcha agba nche dị ka mkpa ndị ahịa si dị. Kedu usoro agba agba a na -ejikarị? Na -esote, ka anyị webata ụlọ ọrụ nchekwa ahịhịa. Dabere na mmeghe nke onye nrụpụta ahịhịa ahịhịa, ụzọ agba agba a na -ejikarị bụ: fesaa n'elu: na -agba mkpuchi mkpuchi ahọrọ n'otu ebe a na -ahụ anya nke ebe nchekwa PVC. Enwere ike fesaa ya n'otu akụkụ ma ọ bụ n'akụkụ abụọ. Agba dị iche iche, mmepụta na -agbanwe agbanwe ma dịkwa mma. Usoro mwepụ nke profaịlụ gbara ọchịchịrị: Tinye agba agba na usoro profaịlụ PVC, wee wepụta profaịlụ gbara ọchịchịrị site na onye na -apụ apụ.
Mgbe ị na -etinye fences ígwè, attentionaa ntị na ntinye siri ike nke ụkpụrụ ịdị mma nke injinịa. Ihe dị iche iche, nkọwapụta, ihe nlereanya, na ọkpụrụkpụ nke ngere ígwè ga -emerịrị ihe injinịa na nhazi chọrọ. A na -ejikọ weld ndị ahụ nke ọma ma na -egbu mara mma. Ọ mara mma, nha nrụpụta ya ziri ezi, ngwaahịa ahụ kwụ n'ahịrị na kwụ ọtọ, ọ na -emezu ihe achọrọ na ụkpụrụ nnabata.
Ogwe ihe nchedo bụ ebe ịnọpụrụ iche ejiri mechie akụkụ abụọ n'ahịrị iji gbochie mmadụ, anụmanụ na ụgbọ ala na-abụghị moto ịbanye n'okporo ụzọ awara awara. Ọ nwekwara ikike ịmịkọrọ ike iku ume, na-amanye ụgbọ ala ndị na-anaghị achịkwa ka ha gbanwee ntuziaka wee weghachi ha na ụzọ ịkwọ ụgbọala mbụ, na-egbochi Ọ nwere mmetụta ịpụ n'okporo ụzọ ma ọ bụ daa n'okpuru àkwà mmiri. Dabere na njirimara igwe ya, enwere ike kee ụzọ nche ụzọ atọ: ụlọ nche siri ike, nke na-adịghị agbanwe agbanwe na nke na-agbanwe agbanwe. Ogwe mgbochi mgbochi, dị ka ebe dị mkpa maka okporo ụzọ awara awara, nwere mmetụta ụfọdụ na nchekwa ịnya ụgbọ elu dị elu, nkasi obi ịnya ụgbọ ala, odida obodo awara awara, yana ọnụ ahịa injinịa. Yabụ, mgbe anyị na-ewu okporo ụzọ awara awara, anyị ga-aghọta nke ọma ngalaba dị iche iche na-emegide ọgụ. Njirimara gụnyere usoro mgbochi ọgụ ya, ọnụ ahịa ọrụ ya, ịdị mfe nke owuwu ya, ọnụ ahịa mmezi ya, akụrụngwa mgbochi ọkụ, yana nhazi pipeline nkwurịta okwu.
A na-eji ihe nkedo eme ihe mgbochi mgbochi ihe mgbochi akwa ahụ. Ọ na-mere site ájá ịkpụzi-mgbatị-ọkara okokụre ngwaahịa akpụ-ájá ọgbụgba ọkụ-ịgba sere. Na mkpokọta, nnukwu nnukwu àkwà mmiri, àkwà mmiri na àkwà mmiri ọkara dị ka okporo ụzọ awara awara na okporo ụzọ klaasị mbụ kwesịrị ịdị na-enweghị isi. A na -etinye ihe nkedo nchedo akwa nkedo n'ime ala; ihe njide ihe nchedo igwe nchara dị obere, dị ọnụ ala, dị mma maka njem, nrụnye, ndozi na ndozi; ya mere, oke okpomọkụ eji eme ihe sara mbara. Site na mmepe ụgbọ njem, ọkachasị okporo ụzọ, okporo ụzọ, na àkwà mmiri buru ibu na nke ọkara na-achọ nchekwa ịnya ụgbọ elu dị elu, nkasi obi ịnya ụgbọ ala, odida obodo, ọnụ ahịa injinịa, wdg, enwere ike kewaa brackets brail brackets bracket brackets usoro nrụpụta. Ogwe nche nkedo nkedo nke ụdị atọ na braket igwe anaghị agba nchara. Enwere ọtụtụ nkọwa na ụdị ihe njigide akwa akwa, na-echetara onye ọ bụla ka ha payaa ntị mgbe ị na-ahọrọ akwa nchekwa: ọ bụrụ akwa buru ibu ma ọ bụ nke nwere ọkara, ị nwere ike họrọ ụdị uwe nche, nke nwere ike ịbawanye mma nke àkwà mmiri ahụ; ọ bụrụ ugwu ma ọ bụ ebe ugwu, enwere ike iji ya. Ogwe ndị nche ejikọtara ọnụ ma ọ bụ ụdị osisi; mgbe anyị na -ezute àkwà mmiri ígwè, anyị kwesịrị ịhọrọ nchara ma ọ bụ alloy alloy; mgbe ị na -ahụ àkwà mmiri ogologo ogologo nke nwere nnukwu àkwà mmiri, ọ dị mkpa ị attentiona ntị na ịnakwere ụdị dabara adaba ma ọ bụ ihe nchedo mgbidi siri ike.
Bridge guardrail na -ezo aka na nche nche arụnyere na àkwà mmiri ahụ. Ebumnuche ya bụ igbochi ụgbọ ala ndị na-enweghị ike isi na àkwà mmiri pụta, na igbochi ụgbọ ala ịbata, gafere, gafere akwa ahụ, na ịchọ ụlọ àkwà mmiri ahụ mma.
6. Pipeline mm/m. Mgbanwe ahụ dị ntakịrị n'okpuru mmetụta okpomọkụ. The conductivity thermal bụ obere, na mgbochi oyi na-arụ ọrụ dị mma karịa nke nkedo ígwè drain ọkpọkọ.
Companylọ ọrụ ahụ na -arụpụta ụdị ọkpọ mmiri dị iche iche nke àkwà mmiri, ọkachasị na -ahụ maka mmiri ozuzo na ọwara mmiri okporo ụzọ. Nkedo ígwè igbapu ọkpọkọ bụ elu ígwè ọkpọkọ mere nke elu-njupụta ígwè na ndị ọzọ nwekwara. Dabere na ihe chọrọ mmiri mmiri dị iche iche, enwere ike kewaa dayameta nke oghere n'ime 0.10m-0.15m, na nsọtụ ala nke ọkpọkọ ahụ kwesịrị ịgbatị opekata mpe 0.15 n'okpuru okporo ụzọ. -0.20m, iji gbochie nsị mmiri na mmiri mmiri n'elu nnukwu ọgịrịga, enwere ike kewaa nha nke ọkpọkọ ahụ n'ime 10mm*1mm-30mm*3mm, a ga-ekesakwa ha na nha ogo 360. , 270 degrees, 180 degrees, na 90 degrees. A na -ejikarị ya eme ihe n'ọhịa mmiri mmiri dị ka okporo ụzọ, okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè, ọrụ ụgbọ oloko, mkpofu ahịhịa, ọwara mmiri, eriri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ogige egwuregwu na nchedo mkpọda nke mmiri dị elu kpatara, yana ịkọ ugbo na ogbugba mmiri n'ubi n'okpuru ala na sistemụ mmiri. Ya na ọmarịcha ọkpọkọ ọkpọkọ na ọwa mmiri plastik, ọ bụrụla ngwaahịa atọ dị na nrụpụta injinị obodo (ọwa mmiri na mmiri mmiri) na obodo m.
1. Nchekwa mmiri mmiri:
Ebe orifice dị n'ime ebe a na -efegharị efegharị. N'ihi ọrụ abụọ nke ebili mmiri na akwa nzacha, orifice adịghị mfe ịjupụta, nke na -ahụ na usoro sistemụ na -aga nke ọma.
2. Nchikota anụ ahụ nke ike na mgbanwe:
Ọdịdị corrugated okpukpu abụọ pụrụ iche na -eme ka ike nrụpụta dị na mpụga dị mma, na sistemụ mgbapụta agaghị emebi site na nrụgide mpụga iji metụta mmetụta mmiri mmiri.
Nhọrọ nke ụdị nchekwa akwa ga-ebu ụzọ chọpụta ọkwa mgbochi ọgụ dị ka ọkwa okporo ụzọ, na-echebara nchekwa ya, nhazi, njirimara nke ihe a ga-echebe, yana ọnọdụ geometric saịtị, wee dabere n'usoro nke ya, akụ na ụba, ewu na ndozi. Ihe dị ka nhọrọ nke ụdị nhazi. Usoro agbakwunyere gụnyere ụzọ atọ: kọlụm agbakwunyere ozugbo, ụdị njikọ flange, yana akwa akwa akwa na akwa akwa akwa na-awụnye n'otu ahụ site na mgbanye ígwè na-ebufe ike. Mgbe ọnọdụ kwere, enwere ike iji ụzọ nchedo mbughari.
Nkume ịchọ mma, Akara stampụ, Ogige Ogige, Handrail tube, Akwụkwọ mpempe akwụkwọ, Ihe ịchọ mma nke Iron Gates,